Emergency Contraception - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေး ဆို ခြင်းမှာ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည့် ဆေးဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းကတော့ levonogestrol 1.5mg ဖြစ်ပါတယ်။
Q : ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာသောက်သုံးသင့်လဲ?
A : အောက်ပါအခြေအနေများတွင် သောက်သုံးသင့်ပါသည် ……
(၃) နေ့စဉ်ဆေးကဒ်သောက်သုံးသူများ သုံးရက်နှင့်အထက် ဆေးသောက်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း
(၄) အလိုမတူဘဲ လိင်ဆက်ဆံခံရခြင်းများ
(၅) Desogestrol ပါသည့် နေ့စဉ်တားဆေးသောက်ရန် ၂၄နာရီနှင့်အထက်နောက်ကျခြင်း
(၆) ၃လ ဆေး (depo)ထိုးရန် ၄ပတ် နောက်ကျခြင်း
(၇) မိန်းမကိုယ် အပြင်၌ သုတ်လွှတ်ခြင်း မအောင်မြင်ခြင်း
(၈) ရက်တွက်၍အတူနေခြင်းနည်းလမ်း မှားယွင်းပီးတွက်မိခြင်း
(၉) မိန်းမကိုယ်တွင်းထည့် သန္ဒေတားပစ္စည်း IUD ပြုတ်ထွက်လာခြင်း
Q : ဤတားဆေးက ကလေးမရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမှာလဲ?
A : မမျိုးဥနှင့် ယောကျာ်းသုတ်ပိုး မတွေ့အောင်တားဆီးပေးခြင်း ၊ မိန်းမသားအိမ်လည်တံ အဝရှိ အကျိအချွဲ ပြစ်စေပီး သုတ်ပိုးမဝင်စေရန်တားပေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ပေးသည်။
– အရေးပေါ်တားဆေးသည် လိင်ဆက်ဆံပီး အမမျိုးအိမ်မှ မျိုးဥမထွက်ခင် သုတ်ကောင်နှင့် မျိုးဥမတွေ့ခင် ရက်အနည်းငယ်(ဆက်ဆံပီး ၇၂နာရီ) တွင်သာ သုံးနိုင်သည်။
– အရေးပေါ်တားဆေးသည် ကိုယ်ဝန်ရှိသွားလျှင် အသုံးမဝင်ပါ။
– ကိုယ်ဝန်ကိုဖျက်ချရန် သုံးသောဆေးမဟုတ်ပါ။
Q : ဘယ်လောက်အထိစိတ်ချရလဲ?
A : လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရဆက်ဆံပီး ၇၂ နာရီအတွင်းသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ဆက်ဆံပြီး ၂၄နာရီအတွင်း သောက်မည်ဆိုပါက ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ၉၅% ရှိပါသည်။
နောက်ရက် များတွင်သောက်သုံးပါက ၈၅% မှ ၅၈% ထိ ကာကွယ်နိုင်စွမ်းလျှော့ကျသွားပါတယ်။
Q : ဘယ်လိုအချိန်မှာသောက်ရမလဲ?
A : လိင်ဆက်ဆံပြီးပြီးခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်ဆံပြီး ၇၂နာရီအတွင်း နှစ်လုံးတပြိုင်နက်သောက်သုံးရပါမည်။
Q : ဘယ်မှာရရှိနိုင်မလဲ?
A : ဆေးဆိုင် များတွင် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် (ECEE 2,pill 72 စသည့် နာမည်များနှင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်)
Q : တစ်လမှာ ဘယ်နခါသောက်လို့ရလဲ?
A : အရေးပေါ်တားဆေးဖြစ်တာကြောင့် ပုံမှန်သုံးရန်မသင့်တော်ပါ။
ပုံမှန်ဆက်ဆံမှုရှိမည်ဆိုပါက နေ့စဉ်သုံး သို့မဟုတ် လစဉ်သုံး သန္ဒေတားသောနည်းလမ်းကိုသာသုံးသင့်ပါသည်။
အရေးပေါ်တားဆေး မသောက်သုံးသင့်သော အခြေအနေများမှာ…..
(၁) ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်ဟု သံသယရှိလျှင်
(၂) ရာသီချိန်မဟုတ်ဘဲ ပုံမမှန်သွေးဆင်းတတ်လျှင်
(၃) ပေါင်ချိန် ၁၆၅ ကျော်လျှင်
(၄) Hormone ဆေးများနှင့် မတည့်လျှင်
(၅) ရင်သားကင်ဆာ ရှိလျှင်
(၂) ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊နှုံးခြင်း
(၃) ရာသီလာချိန်ထက် တပတ်စောခြင်း/နောက်ကျခြင်း
Q : ဆေးသောက်ပီး ပြန်အန်လျှင် ဘာလုပ်သင့်လဲ?
A : ဆေးသောက်ပီး ၂နာရီအတွင်း ပြန်အန်လျှင် နီးစပ်ရာ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။ ဆေးနောက်တကြိမ်ပြန်သောက်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်သလို အအန်ပျောက်ဆေးနဲ့တွဲသောက်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Q : ပုံမှန်(နေ့စဉ်သုံး) တားဆေးအနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
A : အရေးပေါ်တားဆေး ဖြစ်တာကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါအရေးပေါ်အနေအထားများတွင်သာ သောက်သုံးသင့်
လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများကိုကာကွယ်မပေးနိုင်ပါ။ (***ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိသူသည် အခြားစိတ်ချရသော နည်းလမ်းများကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
_နေ့စဉ်သုံး စားဆေး (combined oral contraceptive)
မယ်တင် ( ဆေး ၁ )